Cajiibka ayaa tilmaamaya Talooyin si aad mashruucaaga u ilaaliso Mobile-ka
20kii sano ee la soo dhaafay, qalabka mobile waxay ku bedeleen mashiinnada muraayadahanuxurka webka ee heerka sicirka. Sababtan awgeed, makiinadaha raadinta intooda badan sida Google waxay u beddeleen Raadinta Mashiinka Mashiinka mid ka mid ahdariiqooyinka lagu darajo sareeyo ee weydiimaha raadinta. Ganacsatadu waxay leeyihiin faa'iido u ah isticmaalka qaabkan sida habka suuq-geynta suuqakordhinta aragtida ay u leedahay macaamiisha badan oo caalami ah - ventilatore 142 cm migliore. Si kastaba ha noqotee, fikraddan u adeegsiga ganacsiga iyo horumarinta webka maahanhawl fudud.
Arrimaha soo socda, oo lagu qeexay Ivan Konovalov, Maareeyaha Guusha Macaamiisha Sare Adeegyada Digital, waxay wanaajin doontaa SEO-gaaga qalabka gacanta:
Meelo badan oo isdabajoog ah sida Pop-Ups;
Noocyada yaryar (qiimaha lagu taliyey waa 16 pt);
Flash (aan la taageerin badiyaa shabakadaha moobaylka, waxay keeni kartaa ciqaab ah waxyaabo qarsoon);
Cillad farsamo iyo cayayaan ah
Tirada ereyada xad-dhaaf ah oo ka badan 700 oo Erey
Elemooyinka yar-yar ee Taabashada sida Wareegyada iyo Saxarada Baadhaha;
Ku qorista ereyada xiriirrada dibedda ee goobaha kale;
Xidhiidhada Gudaha ah ee Gudaha (waa inay ahaadaan 75% hoosta desktop)
Arrimaha kor ku xusan waxay noqon karaan kuwa ugu xun SEO-gaaga moobaylka, waxayna jiidayaan website-kaagahoos u dhig haddii aan si haboon u habeynin. Si kastaba ha noqotee, isbeddelada qaar ka mid ah daalacayaasha view view mobile waxay hagaajin doonaan SEO aad. Beddelaadda soo socota waalagama maarmaanka u ah aragtidaada mobile-ka:
1. Hagaajinta xawaarahaaga goobta aad ayay u wanaagsan tahay.
Google wuxuu jecel yahay xawaaraha wareega xawaaraha mobile sababtoo ah wuxuu saameeyaa aragtida isticmaalaha iyoisticmaalka bogga. SearchMetrics, oo ku jira daraasadaha Cilmi-baarista ee Isku-dhafka, ayaa sheegaya in saacad go'an oo ah 1.10 ilbiriqsi ay samayn karto darajo goobtaugu sareeya 10 laakiin hoos u dhaca 1.17 saacadood ee qalabka mobile wuxuu keeni karaa booska ka hooseeya 35. Xawaaraha goobta wuxuu ka mid yahay arrimaha farsamada eewaa inuu sii wanaajiyaa bogaggaaga mobile.
2..Isticmaal AMP (Boggaga Casriga ah ee casriga ah).
AMP waxay leeyihiin HTML iyo CSS code, taasoo micnaheedu yahay inay sahlan yihiin in ay ku dhejiyaan xaansho iyo bixiyaandaalacashada telefoonka. Cabbirka AMP 30 jeer oo ka dhakhso badan oo awood u leh inuu kor u qaado wadooyinka iyo guji qiimaha.
3. Isticmaal liiska ku dhow sagaal alaab.
Tirada qaybaha waxay ku habboonyihiin si fiican waxoogaa baraf ah si ay u daboolaan dhamaan webkacontent. Waa mid ka mid ah arimaha waayo-aragnimada isticmaalaha Google algorithm ayaa isticmaali doona si loo xayirmo goobaha.
4. Isticmaal sawirro si xushmad leh
Isticmaalida sawirada waa hab cajiib ah oo aad ugu gudbin karto fariintaada qofka harsanhabka. Si kastaba ha noqotee, sawirro farabadan oo aad u liidata ayaa sidoo kale liita. Isticmaal afar sawir oo ay tahay in ay si adag u leeyihiin xal u helidda qaransidoo kale sida xajmiga faylka yar iyo farta ciriiriga si loo fududeeyo rarista. Isbedelkani wuxuu badbaadin doonaa xawaarahaaga boggaaga markaad ka tageyso.
Ereyada raadinta waa mid ka mid ah farsamooyinka asaasiga ah ee SEO ee lagaa rabo in lagaa shaqeeyocontent. Ku dhajinta erayada ereyada iyo erayada la xidhiidha jirka ee maqaalladaada waxay ka dhigeysaa boggaaga mobile in uu leeyahay faa'iido muhiim ahdarajadaada
6. Isdhexgalka suuq-geynta warbaahinta bulshada waa mid wax tar leh.
Warbaahinta Bulshada ayaa awood u leh in ay gaaraan malaayiin qof oo isticmaala kuwa jecelwaxyaabaha ku jira internetka. In ka badan 77% dhamaanba internetka ayaa ka gudbaya dadka isticmaala warbaahinta bulshada sida WhatsApp iyo FacebookRasmiga Rasmiga ah ee Raadinta Degmada. Gaadiidka miisaanku waa 26% halka telefoonku yahay 16%. Macluumaadkani macnaheedu waa in telefoonada la hagaajiyowixii ku saabsan mawduuca marka la eegayo makiinadaha basaska iyo iibsashada